Izinto zokubhala zeshishini | Creatives Online
Imockup yezinto zokubhala
Izinto zokubhala eziziinkampani zibhekisa kuphawu lophawu, okanye into ekwaziwa ngokuba yintengiso yomntu. Imalunga nokwenza zonke izinto eziyinxalenye yenkampani eprintwe ngesazisi esifanayo, ubuntu kunye nexabiso lokwahlula. Ke ngoko, xa uyilo lugunyaziswe ukuba luyenze, iimockups zezinto zokubhala zeshishini zifanelekile ekuboniseni uyilo kuba, ngale ndlela, ziyibona inyaniseke ngakumbi.
Kodwa, Zeziphi iimockups zezinto zokubhala ezinokusetyenziswa? Kwi-Intanethi unokufumana ezininzi iintlobo zazo, zombini zisimahla kwaye zihlawulwe. Kwaye senze ukhetho lwezona zilungileyo, zasimahla, ukuze ukwazi ukubonisa umsebenzi wakho kubathengi bakho ngendlela yobuchwephesha.
1 Kodwa yintoni i-mockup?
1.1 Kunye nezinto zokubhala zequmrhu?
2 Iimockups zezinto zokubhala zasimahla: olona yilo lubalaseleyo
2.1 Idesktop corporate izinto zokubhala mockup
2.2 Enye imveliso yezinto zokubhala
2.3 Iimpawu zebrand
2.4 Iincwadi zokubhalela
2.5 I-Minimalist mockup
2.6 Umfanekiso ocacileyo
2.7 Umboniso onemibala
2.8 Ifotorealistic mockup
2.9 Izinto zokubhala ezisisiseko
2.10 Imockup yezinto zokubhala
Kodwa yintoni i-mockup?
Sinokuyichaza i-mockup njengento emele uyilo olwenziwa ngezixhobo zokuhlela umfanekiso ngendlela ebonakala ngathi "yenyani". Oko kukuthi, uyaboniswa umfanekiso olinganisa ubunyani.
Umzekelo, khawube nomfanekiso wakho ucelwa ukuba wenze ikhadi leshishini. Endaweni yokumbonisa uyilo ngokwalo, into oyenzayo kukumbonisa umfanekiso onekhadi lamakhadi oshishino anoyilo olwenzileyo. Ngale ndlela, umxhasi unokufumana umbono ongcono wokuba kuya kujongeka njani ngokwenyani ukuba baprinte uyilo lwakho.
El Injongo ye-mockups kukunceda abantu babone umphumo wokugqibela yolo yilo lwenziwayo, ngendlela yokuba ukwazi ukubona iimpazamo, ama-nuances okanye ubone ngokulula ukuba ijongeka njani.
Kunye nezinto zokubhala zequmrhu?
Umfanekiso wenkampani, kwi-intanethi kunye nomzimba, kubaluleke kakhulu. Enyanisweni, sinokuthi ikwalikhadi lakho leshishini kwaye kufuneka liboniswe kuyo yonke indawo: iinethiwekhi zentlalo, iwebhusayithi, izinto ezibonakalayo (iincwadana, amakhadi oshishino, iipeni, njl. njl.).
Ngesi sizathu, ii-mockups zolu hlobo zisetyenziselwa ukubonisa kwiinkampani uyilo kwizinto ezinokuthi zisetyenziswe ukuze zibone umphumo abanokuthi bawufezekise.
Iimockups zezinto zokubhala zasimahla: olona yilo lubalaseleyo
Nje ukuba sicacise ukuba zeziphi ii-mockups kunye nokubaluleka kwazo kubathengi kunye nakwi-designer, lixesha lokuba sikwazise ukuba zeziphi ezona ziyilo zasimahla esizifumene kwi-Intanethi.
Idesktop corporate izinto zokubhala mockup
Ukuba umxhasi wakho ukucela uthotho lwe uyilo lwezinto zedesika, ezifana nephepha leleta, iikomityi, iiglasi, iipeni, amakhadi oshishino, njl. oku kunokuba lukhetho.
Sibona ingxaki enye kuphela kwaye kubonakala ngathi imnyama namhlophe, ngoko ukuba i-logo inombala ayiyi kuthakazelelwa kakuhle. Ngembuyekezo, ineembono ezili-9 ezahlukeneyo ezikuncedayo ukuba ufumane umbono ongcono.
Enye imveliso yezinto zokubhala
Kule meko sihamba neencwadi, amaphepha, ii-ajenda, njl. Apha ungabona uyilo olucokisekileyo, kunye nombala, oya kuhlala uluthanda.
Nangona kunjalo, le mockup iya kujoliswa ngakumbi kwiinkampani ezinzulu ngakumbi kuba imvelaphi yomfanekiso ngokubanzi imnyama kwaye ukuba inkampani "imhlophe" ngakumbi okanye inamandla, unokwenza iimpazamo xa unikezela ngeprojekthi.
Oku kucoceke ngandlel’ ithile, kodwa kufuneka ukhumbule ukuba kunezinto ezimbalwa kuphela: iphepha leleta, iimvulophu, ifolda kunye nekhadi leshishini (ngaphambili nasemva).
Ijongeka iqaqambe kakhulu kunee besikubonise yona ngaphambili, kodwa ukuba ubucelwe izinto ezininzi iyakuba mfutshane kancinci.
Ukuba sithethe ngaphambili ukuba uyilo lwangaphambili beluncinci kakhulu, kule unayo yonke into. Kwaye kukuba phakathi kwezinto zokubhala zenkampani, akukho mathandabuzo okuba phantse yonke into onokucinga ukuba bayayidinga iya kubonakaliswa apha. Eyona nto ingcono kukuba imvelaphi imhlophe kwaye ikunika umbono oneengile ezahlukeneyo zokujonga konke oku.
Kakade ke, iyona kwinto yokuba uyaziveza kodwa hayi kwiimeko "ezinokwenyani"., njengokuhlala phezu kwedesika, okanye ukuyiphatha ngumntu. Nangona kunjalo, olu yilo luhle kakhulu.
Kule meko, kubonakala ngathi ngokungathi izinto zequmrhu zidada emoyeni. Unayo iphepha, iimvulophu (ngaphambili nasemva), ikhadi leshishini (nangaphambili nasemva) kunye nefolda.
Ilula kakhulu, kodwa kwezo zoyilo apho ezi zinto ziceliwe, zinokugqibelela ukubona iseti.
Sayithanda kakhulu le kuba, nangona kunjalo isibonisa uyilo oluncinci (ngezinto ezimbalwa), ewe iyenza ngokwenyani, ikwazi ukuyibona phantse ngokungathi sele idlaliwe.
Kule meko, unokufihla okanye ubonise izinto ozifunayo, uzisuse okanye uzibeke ngokuthanda kwakho, kunye nombala ongasemva.
Ngale ndlela uya kube unikela a Isishwankathelo sayo yonke into eyenza uphawu. Kakade ke, khumbula ukuba umboniso ofanelekileyo unokubenza bamkele uyilo.
Ngetotali Iifoto ezi-8 eziya kukuvumela ukuba wenze umxhasi abone kwiimbono ezahlukeneyo kunye neefoto zoyilo olwenzileyo ziya kutsala umdla, ngakumbi kuyilo olunemibala kuba, kunye nemvelaphi emhlophe, ziya kugqama ngakumbi.
Izinto zokubhala ezisisiseko
Kule meko igxininisa kwinto eya kuba yikhadi leshishini, imvulophu, ileta kunye nefolda. Kodwa ngokubeka zonke izinto, enye phezu komnye, yenza umphumo omnandi okuvumela ukuba ubone ukuba yintoni umphumo wokubonwayo oya kuba njani.
Ikwanjalo imifanekiso emininzi ukuyijonga kwii-engile ezahlukeneyo kunye neentetho.
Ukuba inkampani yomthengi wakho inxulumene nempahla okanye iivenkile, oku kunokuba lukhetho olulungileyo lokubonisa uyilo lwakho. Kwaye ke unako Yila iibhegi, izikipa, iileta kunye namakhadi oshishino.
Kwi-Intanethi ungafumana uyilo oluninzi olwahlukeneyo ngokuxhomekeke kwinto oyithunyiweyo kwizinto zokubhala. Eyona nto ibalulekileyo kule meko kukukhetha i-mockups yezinto zokubhala zenkampani ezihamba kakuhle kunye nobuntu ukuba inkampani ifuna ukunika ukususela, ukuba ukhetha okungalunganga, kungakhathaliseki ukuba uyilo luhle kangakanani, aluyi kubonwa kwaye lunako. yenza ukuba uphinda inkqubo. Ngaba unawo nawaphi na amathandabuzo ngayo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Imockup yezinto zokubhala
Yila izimvo kwiPower Point